လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်ထိတွေ့မှုသည်အမျိုးသားများကြား Cyber ​​Delinquency တွင်ပါ ၀ င်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်အထူးလျှော့စျေးများဖြစ်စေသည် (၂၀၁၇) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် porn ပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။
comments: စိတ္တဇတွင်ဖော်ပြထားသောထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြင်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုသာပိုင်ဆိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဝမ်းတွင်းပါဖြစ်သော Impulse ။ ဒီလေ့လာမှုကများနှင့် (2015) ဝညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်နှောင့်နှေး: လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုအဘို့အနောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်များအရောင်းအဝယ်ဖြစ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု) Impulse သွေးဆောင်ဖို့ပေါ်လာတွေ့ပြီ။
Cheng ဝမ်နှင့် Chiou ဝမ်-Bin ကို။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့။ ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏ဇွန်လ 2017 ။ https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0582
ပြည်သူ့မကြာခဏအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကြုံတွေ့ရ။ သုတေသန သာ. ကြီးမြတ်ယာယီလျှော့ (ဆိုလိုသည်မှာ, ပိုကြီးတဲ့အနာဂတ်မြားသေးငယ်, ချက်ချင်းအကျိုးအမြတ်ပိုနှစ်သက်တဲ့သဘောထားကို) တွင်ထင်ရှားအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု inducing လှုံ့ဆော်မှု, ယောက်ျားအတွက် သာ. ကြီးမြတ် Impulse ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မပြသခဲ့သည်။ ရာဇဝတ်မှုသုတေသနအတွက် Extant တွေ့ရှိချက်ဆိုးသွမ်းလုံလောက်စွာဆိုးသွမ်းအပြုအမူများ၏ရေရှည်အကျိုးဆက်များမှတဆင့်စဉ်းစားရန်ပျက်ကွက်နေချိန်မှာရေတိုရေရှည်အကျိုးအမြတ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့လေ့ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့စမ်းသပ်မှုတွေအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့သူတို့ရဲ့အလွန်အမင်းဝဝေးလံသောအကျိုးဆက်များ၏ရလဒ်အဖြစ်, လူတို့တွင်ဆိုက်ဘာသက်ငယ်ပြစ်မှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သဘောထားနှင့်ဆက်နွယ်သောဖြစ်နိုင်ခြေစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
စမ်းသပ်မှု 1 ခုနှစ်တွင် "sexy" အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုထိတွေ့သင်တန်းသားများကိုအနာဂတ်မှာလျော့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိတို့အထီးသင်တန်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဆိုက်ဘာ-ဆိုးသွမ်းရွေးချယ်မှု (ဥပမာဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတို့သည်, ဆိုက်ဘာလိမ်လည်မှု, ဆိုက်ဘာခိုးမှုနှင့်တရားမဝင်ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ) ကိုလုပ်ဖို့ပိုရှိုင်းခဲ့ကြ သူကိုလျော့နည်း sexy ဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်ဓာတ်ပုံများကို၏လိင်အယူခံသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤဆက်ဆံရေးတို့သညျလူအလွန်အမင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း sexy ဓါတ်ပုံတွေကိုလည်းကောင်းထိတွေ့အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရပါ။
စမ်းသပ်မှု (၂) တွင်လိင်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအမျိုးသားများသည်အွန်လိုင်းစစ်မှန်သည့်ထုတ်ကုန်များထက်အတုအယောင်များဝယ်ယူရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အခြားသူတစ် ဦး ၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ (ဥပမာ - အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးကိုကျူးကျော်ခြင်း) သို့ဝင်ရောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသည်။ လျှော့ဈေးနှုန်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုသည့်အပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်လိုသည့်အကြားဆက်စပ်မှုကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကဆိုက်ဘာပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွင်အမျိုးသားများပါ ၀ င်မှုကိုလျှော့ချရန်မဟာဗျူဟာတစ်ခုအားထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှောင့်နှေးနေသောဆန္ဒပြည့်ဝမှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်လျော့နည်းစေသည်။